Herinaratra Toamasina: hisy ambim-bava hiatrehana fotoam-piotazana letisia - ewa.mg
Herinaratra Toamasina: hisy ambim-bava hiatrehana fotoam-piotazana letisia
News - Herinaratra Toamasina: hisy ambim-bava hiatrehana fotoam-piotazana letisia
Tapaka ny herinaratra eto
Toamasina, nanomboka ny 26 jona no ho ny mankaty. Manoloana izany,
nilaza ny filohan’ny filankevi-pitantanana, Andriamanampisoa Solo,
ny zoma 11 septambra teo, fa ho tapitra ny delestazy eto Toamasina,
satria vita daholo ny fanarenana ireo milina simba tao amin’ny toby
famokarana any Betainomby sy ny an’ny orinasa Enelec, mpamatsy
herinaratra ny Jirama. Ho ampy ny herinaratra eto Toamasina ary
hisy ambim-bava ka ho ampy hiatrehana ny fotoam-piotazana
Hitombo hatrany amin’ny 37
Nilaza ny talem-paritra Jirama, i
Toto Jean de Dieu, fa tsy nisy afa-tsy 17,5 MW ny tanjaky ny
herinaratra teto Toamasina, nanomboka ny 26 jona teo. Tafakatra 27
MW izany, ankehitriny, taorian’ny nanamboaran’ny teknisianina
vahiny Tiorka ireo milina simba. Nanamafy ny PCA Jirama fa hitombo
hatrany amin’ny 35-37 MW izany hatramin’ny faran’ny taona, fotoana
hisian’ny taom-piotazana letisia. Manampy ireo, nambarany fa
manodidina ny 30.000 hatramin’ny 50.000 ny mpanjifa vaovao
hampidirana herinjiro mialoha ny faran’ny taona eto
Tapaka ny jiro ny
alatsinainy sy talata
Etsy an-kilany anefa, tsy tena
foana ny delestazy eto Toamasina.Tapaka ny jiro tany amin’ny
fokontany maro, ny alatsinainy teo, nanomboka tamin’ny 4 ora
tolakandro hatramin’ny 8 ora alina. Nitohy tany amin’ny fokontany
vitsivitsy izany ny ampitso talata.
fanamboarana « transformateur » ny Jirama. Eny amin’ny
ozinina eny Analamahitsy Antanetibe no misy azy. Manampy ireo koa
ny kamiao manokana “camion à grue” maherin’ny 20, hanampy ny
fitaterana sady fametrahana ny andrin-jiro.
Nitsidika teny an-toerana
ny tale jeneralin’ny Jirama, omaly ary nambarany fa hanafaingana ny
fampidiran-jiro miisa 12.000, kasaina ho vitaina mialoha ny
faran’ny taona 2020 ny fahazoana ireo fitaovana ireo. Hanatsarana
ny famatsiana herinaratra amin’ireo faritra mena, ao anatin’ilay
tetikasa Herinandro iray mira tanàna iray ihany koa.
L’article Herinaratra Toamasina: hisy ambim-bava hiatrehana fotoam-piotazana letisia a été récupéré chez Newsmada.
Mandroso ny asa fanamboaran-dalana etsy Alarobia mihazo an’i Tsarasaotra iny. Ny 75%-n’ny asa no efa vita, amin’izao fotoana izao. Tsiahivina fa tamin’ny 3 jona no nanomboka ny asa izay vitaina amin’ny 30 aogositra ho avy izao. Miasa andro aman’alina ireo ekipa mpanamboatra ny lalana mba hanatratrarana an’io fe-potoana io, sady hampilamina ny fifamoivoizana noho ny fahatongavan’ny Papa François eto Madagasikara amin’ny 6 septambra ho avy izao. Efa hiditra amin’ny fandrakofana tara ireo mpiasa ireo ankehitriny. L’article Fanamboaran-dalana est apparu en premier sur AoRaha.
Samy mahatsapa ny fanjakana sy ny Tahirimbola iraisam-pirenena (FMI)amin’ ny lanjan’ny harena an-kibon’ny tany sy ny solika ho fampandrosoana ny toekarena.Nihaona tamin’ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika (MMRS), Ravokatra Fidiniavo, ny solontenan’ny Tahirimbola iraisam-pirenena (FMI) eto amintsika, i Marc Gérard, ny alakamisy 16 mey teo.Nambaran’ny minisitra, Ravokatra Fidiniavo, fa tanjona iombonan’ny roa tonta ny hitondran’ny sehatry ny fitrandrahana ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara fampandrosoana toekarena sady mipaka any amin’ny isan-tokantranon’ny Malagasy.Hatsaraina ny lafiny hetraNanamafy ny fahavononany hanohana an’i Madagasikara amin’ity sehatra ity ny solontenan’ny FMI, amin’ny alalan’ny fanohanana teknika, ny fanamafisana ny fahaiza-manao amin’ny lafiny hetra amin’ny harena an-kibon’ny tany mba hiantraika any amin’ny lafiny toekarena ankapobeny azo tsapain-tanana.Miara-mahatsapa ny roa tonta fa mitondra voka-tsoa ho an’ny fampandrosoana ny toekarena ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany sy ny solika. Nomarihin’i Marc Gérard koa ny hijerena manokana ny hanatsarana bebe kokoa ny lafiny hetra amin’ireo sehatra ireo. Hitohy ity fihaonan’ny roa tonta ity, hijerena ity lafin-javatra ity.Njaka AndriantefiarinesyL’article FMI: manohana ny harena an-kibon’ny tany a été récupéré chez Newsmada.
Tonga ihany na saro-piterahana aza! Nahazo tale jeneraly vaovao ny eo anivon’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco). Efa ho iray volana izao no niandrasan’ny maro azy. Antenaina fa hitondra zava-baovao sy paikady vaovao hiadiana amin’io fahalovana mamotika ny fianam-pirenena io ity tale jeneraly vao avy notendrena ity matoa nirona tany aminy ny safidin’ny Filohan’ny Repoblika. Na izany aza isaorana ny teo aloha satria tsy niala maina fa mba nahavita ezaka maromaro amin’ny famongorana ny kolikoly teto amitsika. Betsaka ireo raharaha kolikoly efa nalefa teny anivon’ny Fitsarana manokana misahana izany, tato anatin’ny taona vitsivitsy izay. Mba efa misimisy ihany ireo trondro vaventy no voafaoka tao anatin’ny harato, na dia tsy mbola hita aza ny fiafaran’ny raharaha sasany. Isan’ny firenena mbola tsy afaka ao anatin’ny risoriso sy kiantranoantrano ny firenentsika. Sehatra maro no ahitana izany, izay efa fanta-poko fanta-pirenena. Na eo amin’ny raharaham-pitsarana izany, ny fitandroana ny filaminana, ny tsenan’asam-panjakana. Nisonga­dina tao anatin’ny Filankevitry ny minisitra mihitsy aza, omaly, fa ho hentitra ny fanjakana manomboka izao mahakasika ireo tsenan’asam-panjakana izay tena hanjakan’ny kolikoly avo lenta. Matoa tsy hay refesina ny elanelana eo amin’ny mpanan-karena mihoapampana sy ny vahoaka mafiady eto Madagasikara, dia ao raha! Manjaka loatra ny kolikoly. Hany ka izay manana ihany no manana fa ireo tsy manana kosa ny kely ananany aza mbola hotsoahina aminy. Manjaka foana ny tsy rariny rehefa mbola ny mahitahita sy ny lava tanana no manjaka. Tsy handroso mihitsy ny firenena rehefa tsy voahaja ny “Fahamarinana”. Na izany aza, andraikitry ny olom-pirenena tsirairay no manova toe-tsaina sahy handray andraikitra, sahy hijoro, sahy hitory araka ny rariny sy ny hitsiny. Saingy ny olana ary ahiana mafy, dia mbola takon’ ny lainga tsara lahatra sy ny fahan-dalitra foana ny marina mitavoza- voza. Dia ho hita eo indray izany izay adinao Andriamatoa Tale jeneraly! L’article Marina mitavozavoza est apparu en premier sur AoRaha.
Ankizy – Akany Avoko: nitondra fanampiana ny mpianatra kameroney
Mitondra ny anjara birikiny eo amin’ny lafiny sosialy ny fikambanan’ny mpianatra kameroney, tarihin’ny filohany, i Malaika Ginette. Isan-taona, ireo mpianatra kameroney ireo, mitondra fanampiana ho an’ireo ankizy mijaly, raisina sy taizana ao amin’ny Akany Avoko. Misy 200 izy ireo ao amin’ny Akany Avoko, nitondran’ireo mpianatra kameroney ny anjara masoandrony kely : vola 750 000 ariary, sakafo (vary, menaka …), ary akanjo.«Fanampiana mariky ny fandraisanay andraikitra amin’ireo ankizy ireo izao, ahitan’izy ireo ny ho aviny, hanomezana fanabeazana sahaza ho azy sy miantoka ny fivelaran-tsainy. Fanirianay ny iainan’ireo ankizy ireo ny zony feno, indrindra amin’ny lafiny fanabeazana, kolontsaina, fialamboly … sy izay zo fototra hafa rehetra mampivoatra azy ireo », hoy i Malaika Ginette.Hatramin’ny taona maro ny fiaraha-miasa eo amin’ny Akany Avoko sy ny fikambanan’ny mpianatra kameroney. Hatramin‘izao, mitohy hatrany ny fanampiana ny Akany, ka misy mpilatsaka an-tsitrapo avy amin’ny fikambanana mampianatra maimaimpoana taranja frantsay, sy manokana fotoana matetika iarahana miala voly amin’ireo ankizy ireo. Manohana ny fikambanana amin’ny asa sosialy ataony ny Welding Steel Construction, Camtrack, Star … izay samy mametraka fahatokisana tanteraka amin’ny fikambanana. R.MathieuL’article Ankizy – Akany Avoko: nitondra fanampiana ny mpianatra kameroney a été récupéré chez Newsmada.
Na inona na inona fandaharanasan’ny mpitondra, tsy izay ihany no iankinan’ny fanovana sy fampandrosoana ity firenena ity. Maro ny zavatra tokony hahitsy, indrindra amin’ny fisainana sy ny fomba fijery, izay samy mibaiko ny fanapahan-kevitra manoloana tranga na olana samihafa.Iray amin’ireny ny halako bika, tsy tiako tarehy, izay mbola nitarika ny safidin’ny sasany tamin’ireny fifidianana nifanesy ireny. Tsy misy fijerena foto-kevitra, tsy misy fandinihana lalina ary tsy misy koa, noho ireo rehetra ireo, tanjona mazava. Mipetraka io olana io na eo amin’ny fanaovana politika na hatrany amin’ny fiarahamonina, sahanin’ny fokontany, amin’ny ankapobeny.Ho an’ny eny ifotony, tsy vitsy ny tsy mifankahazo noho ny olana madinika, izay mety ho voavahan’ny dinidinika ihany. Rehefa misy ny fivoriana na fanapahan-kevitra ilàna ny hevitry ny maro, apetraky ny sasany foana io « halako bika, tsy tiako tarehy » io. Tsy mba misy fihainoana sy fandalinana ny hevitry ny hafa fa ny fankahalana no mandeha aloha.Eo amin’ny tontolo politika, toy ny fahavalo na ny mihoatra izany mihitsy ny iheveran’ny andaniny ny ankilany, hany ka na hevitra mety hampahomby zavatra aza, raisina ho tsy manjary avy hatrany. Eo koa ny fanilikilihana izay tsy mpiray petsapetsa na mpiara-nanohana. Ny hevitra, anefa, tera-bary; ny hevitry ny maro, mahataka-davitra… Fahendren’ny razantsika avokoa ireo, izay samy manome lanja ny olona tsirairay, ao anaty fiarahamonina.Efa nisafidy ny lalana sy ny lalàn’ny demokrasia i Madagasikara, ka na inona na inona ambara, tokony halalaka ny fanehoan-kevitra ary tsy maintsy misy ny mpanohitra. Tsy fotoan’ny fijerena tavan’olona intsony izao. Asa, avy hatrany, no tian’ny fitondrana tanterahina ka tsy ireo “tsy maty voalavo an-kibo” no handeha hanao vato misakana tsy hanatrarana ny tanjona. Na izany aza, aleo halevina impito mandrifotr’olona ny “halako bika, tsy tiako tarehy” ka rehefa hita fa hevitra mahomby, mba hiaraha-manatontosa fa tsy hotoherina fahatany.Randria. L’article Foano ny « halako bika, tsy tiako tarehy » a été récupéré chez Newsmada.
Amin’ny alakamisy mihitsy vao hisy orana indray eto Analamanga araka ny tomban- tomban’ny teknisianina mpamantatra ny toetry ny andro. Ho maina kosa ny andro any amin’ny faritra Atsinanan’ny Nosy mandritra ny telo andro saingy hanorana amin’ny faritra sisa. Somary ho maina ny any amin’ny faritra Atsimo ny faran’ny herinandro. Tsy ahiana kosa ny fiforonan’ ny rivo-doza amin’ity heri- nandro ity, raha ny vinavina hatrany. Hidina ny mari-pana ambony amin’ny faritra Avaratry ny Nosy. Ny mari-pana ambany dia eo anelanelan’ny 16°C – 26°C ary ny mari-pana ambony ao anatin’ny 27 – 37°C. L’article Toetr’andro est apparu en premier sur AoRaha.
67ha: jiolahy mpamerin-keloka tratra nanendaka indray
Vehivavy iray nilalao telefaonina finday tao anaty taxi-be no niharan’ny fanendahana nataon’ireo jiolahy miisa telo, teny 67 ha, ny faran’ny herinandro teo. Niantso vonjy ilay niharan’ny fanendahana ka raikitra ny fifanenjehana. Tsy lasa lavitra anefa dia tratra ny iray amin’ireo olon-dratsy raha tafatsoaka kosa ireo namany roa lahy niaraka amin’ilay telefaonina. Natolotra ny Polisim-pirenena ao amin’ny CSP7 eny 67 ha ity jiolahy raindahiny ity. Nandritra ny fanadihadiana ilay jiolahy tratra ny nanondroany ireo namany miisa roa ka noraisim-potsiny ihany koa izy roa lahy. Nomarihin’ny polisy fa efa mpamerin-keloka ny iray amin’izy telo lahy satria efa nisazy ny taona 2017 noho ny resaka halatra telefaonina ihany. Anatra ho an’ireo mampideradera sy manao “facebook” any anaty taxi-be ny toy izao satria mampirongatra ny asan-jiolahy. Tokony hojerena akaiky koa ireny jiolahy mpanao sinto-mahery amin’ny fitohanan’ny fiara ireny.J.C L’article 67ha: jiolahy mpamerin-keloka tratra nanendaka indray a été récupéré chez Newsmada.
Voka-dratsin’ny hanoanana :: Zaza valo matin’ny Kere any Atsimo
Lasibatry ny tsy fahampian-tsakafo. Mihatra aman’aina amin’ireo zaza mihitsy ny hanoanana lalimpaka na Kere any amin’ny faritra Atsimo. Ankizy valo no namoy ny ainy vokatr’ izany tany amin’ny fokontany Ankilimarohatsy ao amin’ny distrikan’Amboasary Atsimo, faritra Anosy. Fantatra fa tsy misakafo mihitsy ireo zaza ireo. Manampy trotraka amin’ny fahavoazan’ny olona any amin’iny faritra Atsimo iny ny hain-tany. Mponina manodidina ny 1,6 tapitrisa no mbola hiatrika an’io toetany io indray. Mila tohana ara-tsakafo maika ny efatra arivo sy dimy alina sy dimy hetsy (554 000) amin’izy ireo. Ankizy roa alina sy iray hetsy ihany koa, araka ny tombana, no ahiana hiharan’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka. Vao mainka nampananosarotra ny fahazoan’ireo mponina marefo sakafo sy tolotra ara-pahasalamana ny fisian’ny valanaretina Covid-19. «Tsy misy sakafo mihitsy ao amin’ilay tanàna. Ritra tanteraka ny reniranon’i Mandrare. Nidina tany ifotony mihitsy aho sao dia tazomoka no nahazo azy ireo. Tena tsy misy nofo intsony ireo olona, fa taolana sisa, izay ankizy no betsaka, manodidina ny 2 sy 4 ary 5 taona. Tsy misakafo izy ireo fa matory fotsiny amin’izao. Hanoanana no manjo azy ireo fa tsy aretina velively. Nitondra vary 10 gony sy mangahazo 20 gony ho azy ireo aho », araka ny tatitry ny solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tany Amboasary Atsimo, Angèle Solange. Tsy afa-mitsangana Notsindriany fa tsy ny ankizy ihany no lasibatra amin’ity kere ity fa misy ihany koa ireo olon-dehibe. Tsy ao amin’io tanàna io ihany fa any amin’iny tapany Atsimon’ny Nosy iny. Latsa-dranomaso ity solombavambahoaka ity nitantara ny zava-misy any an-toerana, toy ny any Afrika, hoy izy. Ankoatra ny hahiazana dia voalazany fa tsy afaka mitsangana intsony ny olona any. Olana iray goavana, etsy an-daniny, ny tobim-pitsaboana izay anaovany antso avo amin’ny fitondram-panjakana. Nahatonga fanampiana, toy ny vary 500 kilao ary mangahazo 600 kilao, ihany koa anefa ny fitondram-panjakana,. Fahavoazana mitarazoka efa ho am-polony taona maro no mihatra amin’ireo ampahan’ny mponina any Atsimo noho io Kere io. Samy nilaza ho nanam-bahaolana ireo mpitondra nifandimby saingy tsy nisy nahitam-bokany maharitra, hatramin’izao. Vahaolana farany notinapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra, tamin’ny 9 septambra 2020, ny fananganana ny orinasa « Nutriset », izay hamokatra sakafo be otrikaina ho an’ireo zaza sy reny iharan’ny kere any amin’ny faritra Atsimo. Tokony efa ho tonga tany an-toerana ireo fitaovana hampiasain’izany orinasa izany L’article Voka-dratsin’ny hanoanana :: Zaza valo matin’ny Kere any Atsimo est apparu en premier sur AoRaha.
(photo : Rotaract Club) Zo Iray, voilà le nom donné à cette action Club Faneva où l’objectif est d’aider les femmes de la prison d’Antanimora à avoir une vie décente dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Selon les explications des donateurs, les femmes en milieu carcéral accèdent difficilement aux serviettes hygiéniques jetables et aux méthodes de prévention contre la Covid-19. C’est ainsi que dans une vision d’entraide et de mécénat, le Rotaract Club Faneva et quelques sociétés partenaires ont décidé d’offrir 200 serviettes hygiéniques lavables, et 100 masques en tissu, aux femmes de la section D d’Antanimora. Cette action s’inscrirait dans les axes stratégiques du Rotary Club International, à savoir la prévention des maladies et le respect de l’environnement. En effet, les serviettes hygiéniques lavables sont moins polluantes et plus respectueuses de l’environnement. Anja RANDRIAMAHEFA L’article Hygiène de la femme : Les femmes incarcérées à Antanimora reçoivent des serviettes hygiéniques est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Hygiène de la femme : Les femmes incarcérées à Antanimora reçoivent des serviettes hygiéniques a été récupéré chez Midi Madagasikara.